Nahemotra Ny Fitsarana: Fihetsiketsehana Rehefa Namoaka Ary Avy Eo Nampidirin’ny Fitsarana Tiorka Am-ponja Indray ny Lehiben’ny Amnesty International · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Febroary 2018 4:39 GMT
Ireo mpanohana nivory tao ivelan'ny fitsarana tao Torkia. Sary avy amin'i Arzu Geybullayeva.
Nisy olona vitsivitsy niangona teo ivelan'ny fitsarana Caglayan. Nihazona ny sora-baventy hoe “Avohay i Taner” izy ireo raha namaky tamin'ny feo mafy ny fitakian'izy ireo kosa ny solontena avy ao amin'ny biraon'ny Amnesty International tao Torkia .
“Mitaky ny famoahana tsy misy fepetra an'i Taner izahay,” hoy ny iray tamin'ireo mpiaro ny zon'olombelona raha niresaka tamin'ny vondrona mpanao gazety nandritra ny fivoriana tamin'ny 31 Janoary izy ireo.
Gaga tampoka sy faly ny fianakaviana sy ny namana, rehefa nandidy ny famoahana vonjimaika an'i Taner Kilic ny fitsarana, izay filohan'ny Amnesty International ao Tiorkia, ary efa tany am-ponja nandritra ny valo volana. Izy sisa no hany tsy navoaka ny fonja raha navotsotry ny fitsarana kosa ireo mpikambana rehetra tao amin'ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona #Istanbul10 tamin'ny volana Oktobra tamin'ny herintaona.
Vetivety ihany anefa izany hafaliana izany. Satria ilay mpampanoa lalàna izay efa nangataka ny hitazonana an'i Taner tany am-ponja dia nampakatra avy hatrany ilay fanapahan-kevitra ary nahazo rariny avy amin'ny fitsarana ambaratonga faharoa ilay fangatahana .
Andro iray taty aoriana, nanaiky ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ambaratonga faharoa ny fitsarana ambaratonga voalohany tamin'ny fanohizana ny fitazonana azy. Inoana noho izany fa mbola hijanona any am-ponja mandra-pahatongan'ny fe-potoana fitsarana manaraka izay kasaina hatao ny 21 Jiona 2018 i Kilic.
‘Krizy ao amin'ny Rafi-pitsarana ao Torkia’
Ny filoha mpiaro ny zon'olombelona @NachoSAmor dia niahiahy momba ny fanovana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana tamin'ny fampidirana am-ponja indray ny lehiben'ny Amnesty ao Torkia.
Nilaza ny Sekretera Jeneralin'ny Amnesty Salil Shetty tao anatin'ny fanambarana iray taorian'ny nanovana ilay fanapahan-kevitra:
Izany no ohatra farany tamin'ny krizy ao amin'ny rafi-pitsarana ao Tiorkia izay manimba ny aina sy mikiky ny zo amin'ny fitsarana marina. Nandrava an'i Taner sy ny fianakaviany ary ireo izay rehetra mijoro ho amin'ny rariny any Torkia ny famotsorana azy mba hihaona amin'ny varavaran'ny fahafahana izay narindrina tampoka teo anoloany.
Voampanga i Kilic satria hoe mpikambana tao amin'ny vondrona mpampihorohoro, fiampangàna izay nolazain'ireo mpanohana azy sy ny vondrom-piarahamonina mpiaro ny zon'olombelona iraisam-pirenena fa tsy marina. Raha ny marina, voampanga ho nampiasa fampiasa fandefasan-kafatra antsoina hoe ByLock i Kilic izay voalaza fa nampiasain'ireo mpiray tsikombakomba tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny Jolay 2016.
Nanambara i Kilic sy ireo mpisolovavany fa tsy nisy mihitsy ny soritra nahitana ny fitrohana ny fampiasa toy izany tao amin'ny findainy nandritra ny fitsarana omaly.
Nanolotra ny porofo i Taner fa tsy nitroka na nampiasa ny ByLock izy. Tsy nampiseho ny zavatra nataony momba izany akory ny fanenjehan'ny fitsarana. Na teo aza izany, nitaky fitazonana am-ponja an'i Taner ny mpampanoa lalàna.
Nanolotra ny tatitra nataon'ny vavolombelona manam-pahaizana fahatelo tao amin'ny tribonaly ny mpisolovavan'i Taner izay namintina hatrany fa tsy nampiasa ny ByLock i Taner. Nampiseho ity farany fa nanana fampiasa “mor beyin” roa i Taner izay fantatra fa nampiseho fifandraisana sandoka tamin'ny ByLock. Mazava noho izany fa tsy nanana ByLcok izy.
Tamin'ny alàlan'ny rohinà lahatsary no nanatrehan'i Kilic ny fitsarana raha notazonina tany amin'ny fonja iray tao amin'ny faritany andrefan'i Izmir izy. Nolaviny ny fampiasana ny fampiasa nandritra ny fotoana maro, anisan'izany ny tamin'ny 31 Janoary. Taorian'ny ora maromaro nanaovana famotorana, nisintaka kely ny fitsarana, ary nanambara ny fanapahan-keviny tamin'ny famotsorana vonjimaika an'i Kilic miaraka amin'ny fandoavana onitra taorian'izay.
Nisy ny fifaliana niombonana teny rehetra teny sy tamin'ny aterineto tamin'io fotoana io:
Navoakan'ny Fitsarana ihany ilay filohan'ny Amnesty ao Tiorka Taner Kılıç!!!
Faly tamin'ny vaovao momba ny famotsorana an'i Taner ny rahalahiny sy ny zanany vavy. Dingana iray mankany amin'ny rariny!
Vaovao mahafinaritra efa nandrasana hatry ny ela. Arahabaina ny ekipan'i Torkia sy ireo mpanentana rehetra ary ireo mpikatroka rehetra izay niasa mafy nandritra ny fanagadrana tsy ara-drariny nandritra ny 8 volana! Mitohy ny ady hiarovana ny zon'olombelona any Torkia. Mbola maro ireo mpiaro ny zon'olombelona no any am-ponja.
Ora vitsivitsy taorian'izay, nahaketraka ny fianakavian'i Taner ny vaovao momba ny fanapahan-kevitra vaovao avy amin'ny fitsarana :
Nandrava an'i Taner sy ny fianakaviany ary ireo izay rehetra mijoro ho amin'ny rariny any Torkia ny famotsorana azy mba hihaona amin'ny varavaran'ny fahafahana izay narindrina tampoka teo anoloany. “@SalilShetty @ amnesty momba ny fisamborana indray ary ny famerenana azy indray higadra.
Ny 24 ora farany:
1. Nandidy ny famotsorana ilay filohan'ny Amnesty ao Torkia Taner Kilic (omaly) ny Fitsarana A rehefa notànana nandritra ny 8 volana tany an-tranomaizina
2. Rehefa nanao fampakarana ny mpampanoa lalàna, nandidy ny fijanonan'i Kilic any am-ponja (omaly alina) ny Fitsarana B.
3. Nanova ny didim-pitsarana navoakany voalohany (tamin'ity maraina ity) ny Fitsarana A.
Here we are. Our colleague, @amnesty Turkey chair #TanerKılıç will NOT be released. The court changed its mind… Why? Who knows, no grounds provided. Devastating for the family and an affront to justice. #FreeTanerhttps://t.co/G5iuVmA6dI
Eto isika. Tsy havoaka ny mpiara-miasa amintsika, lehiben'ny Amnesty eto Torkia Taner Kılıç. Nanova ny heviny ny fitsarana … Nahoana? Tsy misy mahalala ny antony. Fahaketrahana ho an'ny fianakaviana ary fanitsakitsahana ny rariny
Tsy vao voalohany izao ny fitsarana no nanafoana ny fanapahan-keviny manokana.
Mampalahelo i Taner sy ny Fitsarana Tiorka. Indrisy anefa fa tsy olana vaovao izany, maro ny fanapahan-kevitra navoaka toy izany no tsy nampiharina tany Torkia
Stop this cruel game, #FreeTaner! #FreeRightsDefenders#FreeThemAllhttps://t.co/YqRmWUjUDD
Manohina tanteraka! Toa lasa fahazarana ho an'ny fitsarana ao Torkia ny mamoaka didy famotsorana ho an'ireo gadra ary mamerina azy ireo any am-ponja avy hatrany indray. Nampiharina tamin'ireo mpanao gazety maromaro izany tamin'ny herintaona.
Atsaharo ity lalao ratsy ity.
Nanatrika ilay fitsarana tamin'ny 31 Janoary tao amin'ny fitsarana tao Caglayan any Istanbul ny mpanoratra ity lahatsoratra ity .
5 ora izayAlzeria